NGICELA FUNDA! http://www.knwautobody.com kudinga ukucatshangelwa FOR KANYE AS A ISIMO yokuvumela ukusebenzisa kwakho http://www.knwautobody.com.
Ngokufinyelela NOMA UKUSEBENZISA LE SITE kumela ukuthi unemvume NGOKUGCWELE NENZE ukubopha WENA, YILUPHI WESITHATHU, COMPANY, NOMA KWEZOMTHETHO ENTITY, NOKUTHI UKUSETSHENZISWA YAKHO / NOMA Ukuxhumana, Kanye kokuqhubeka noma uxhumana, WITH THE SITE lwakha NJENGOBA YAKHO ufundile futhi wavumelana LEZI IMIBANDELA kanye nezinye izivumelwano UKUTHI THINA ABANYE post esakhiweni.
Ngokubabheka, UKUHAMBELA, UKUSEBENZISA, NOMA uxhumana http://www.knwautobody.com noma nanoma banner, VELA, NOMA NOKUKHANGISA ukuthi ivela IT, Uyavumelana zonke izinhlinzeko zalo LOKHU IMIBANDELA KWENQUBOMGOMO KANYE inqubomgomo yobumfihlo http://www.knwautobody.com.
http://www.knwautobody.com Ngokuqondile ephika lokufinyelela kunoma yiluphi KOMUNTU UKUTHI imbozwe ONLINE PROTECTION IMINININGWANE eMthethweni weZingane (CUP) OF 1998.
http://www.knwautobody.com uyaligodla ilungelo unqabe noma yimuphi umuntu noma isibukeli FOR YILUPHI isizathu esisemthethweni. Ngaphansi kwemigomo THE Ingqubomgomo yobumfihlo, ILIPHI WAMUKELA AS A ISIMO FOR NOKWETHULA, http://www.knwautobody.com INGABE bavunyelwe ukuba babuthe kanye nedatha UKUBEKA KWABAHLOLWAYO ngenjongo yokuthola inyumbazane futhi kwabaningi kulokunye.
LOKHU IMIBANDELA KWESIVUMELWANO zingashintsha ngezikhathi. Izivakashi AN UMSEBENZI isenzangakhona, Njengengxenye ukubacabangela imvume yokufinyelela http://www.knwautobody.com, Ukuzigcina UKWAZISWA lezi zinguquko BY lolu IMIBANDELA IKHASI NGASINYE SIKHATSI bahambela http://www.knwautobody.com.
Abakulesi IMIBANDELA KWESIVUMELWANO
Izivakashi, ababukeli, abasebenzisi, ababhalisile, amalungu, abaxhumana, noma amakhasimende, bebonke okukhulunywe ngayo nantu noma njengoba “Izivakashi,” abanengxenye kulesi sivumelwano. The website nabanikazi yayo kanye / noma abaqhubi amaqembu kulesi sivumelwano, nantu noma okukhulunywa ngokuthi “Iwebhusayithi.”
UKUSETSHENZISWA ULWAZI KULO WEBSITE
Ngaphandle uke wangena isivumelwano esibhaliwe express nale website ukuze Kunalokho, izivakashi, ababukeli, ababhalisile, amalungu, abaxhumana, noma amakhasimende abanalo ilungelo ukusebenzisa lolu lwazi setting commercial noma umphakathi; abanalo ilungelo ukusakaza kulo, ukopishe it, ngiwusindise, ngiyiphrinta, ukuwudayisa, nokusakaza noma ikuphi izingxenye okuqukethwe kule website. By zokungena okuqukethwe kule website, uyavumelana lesi simo lokufinyelela futhi uyavuma ukuthi noma yikuphi ukusetshenziswa okungagunyaziwe emthethweni futhi kungase ukuba izinhlawulo nezakhamuzi noma lobugebengu. Again, Isivakashi alinaso amalungelo okuya ukusebenzisa okuqukethwe, noma izingxenye zalo, kuhlanganise yolwazi yayo, amakhasi angabonakali, amakhasi kuxhumene, ikhodi ecashile, noma ezinye empahla isayithi ingase iqukathe, nganoma yisiphi isizathu, noma yikuphi ukusetshenziswa leze. Iqaphela iqiniso lokuthi kungase kube nzima inani umonakalo ngqo eqhamuka kulowo athikameza leli lungiselelo, Isivakashi uyavuma nxephezela abanikazi http://www.knwautobody.com kanye umonakalo kwavala in inani US. $100,000, noma, uma kungaba ibalwe, izindleko zangempela futhi umonakalo langempela ngoba ukwephulwa ngaleli lungiselelo, yikuphi mkhulu. Isivakashi ezigunyaza ukuthi uyaqonda ukuthi nokwamukela leli lungiselelo isimo zokufinyelela http://www.knwautobody.com nokuthi ibukela http://www.knwautobody.com lwakha ukwamukelwa.
Ubunikazi WEBSITE NOMA ilungelo lokusebenzisa, Ukudayisa, Kumemezeleni OKUQUKETHWE YILO WEBSITE
The website futhi ekuqukethe eziphethwe noma ilayisensi umnikazi website. Material equkethwe kwi website kufanele Ngokuzidla ukuba nokuphathelene kanye lwamalungelo agodliwe. Izivakashi awunawo amalungelo yakho konke okuqukethwe indawo. Ukusetshenziswa website okuqukethwe nganoma yisiphi isizathu emthethweni ngaphandle kwenziwa inkontileka express noma imvume website.
HYPERLINKING TO SITE, CO-Branding, “Zokweseka” KANYE incwadi SITE kwenqatshelwe
Ngaphandle begunyazwe by website, kungabikho muntu oxhumano kule sayithi, noma izingxenye zalo, (okubala, kodwa kungagcini, logotypes, zokuthengisa, izimpawu noma ezinelungelo lobunikazi) nesabo nganoma yisiphi isizathu. Ngaphezu kwalokho, wena abavunyelwe ukuba naleyo URL (ikheli website) yalesi website noma yimuphi page yale website kunoma iyiphi abezindaba commercial noma non-commercial ngaphandle kwemvume yabo ivela kithi, noma wena avunyelwe ukuba 'luhlaka’ isayithi. Wena ngqo uyavuma ukuba ubambisane Iwebhusayithi ukususa noma de-kusebenze yimuphi imisebenzi efana, futhi necala lazo zonke umonakalo ezivela beqa leli lungiselelo. Iqaphela iqiniso lokuthi kungase kube nzima inani umonakalo ngqo eqhamuka kulowo athikameza leli lungiselelo, uyavumelana nxephezela abanikazi http://www.knwautobody.com kanye umonakalo kwavala in inani US. $100,000, noma, uma kungaba ibalwe, izindleko zangempela futhi umonakalo langempela ngoba ukwephulwa ngaleli lungiselelo, yikuphi mkhulu. Wena unika ukuthi uqonde ukuthi nokwamukela leli lungiselelo isimo zokufinyelela http://www.knwautobody.com nokuthi ibukela http://www.knwautobody.com lwakha ukwamukelwa.
Nesitatimende FOR OKUQUKETHWE INCWADI SITE
http://www.knwautobody.com uyawachitha noma yimuphi umthwalo ukunemba okuqukethwe kubonakala, exhumene on, noma kushiwo http://www.knwautobody.com. Izivakashi lokucabanga konke ingozi eziphathelene wokubuka, ukufunda, usebenzisa, noma sithembele phezu lolu lwazi. Ngaphandle uma uke kwakhiwa isivumelwano express ukuba Kunalokho nathi, awunawo ilungelo bathembele yiluphi ulwazi oluqukethwe lapha njengoba olunembile. Senza akukho siqiniseko ezifana.
Nesitatimende FOR umonakalo owenziwe kwikhompyutha yakho noma SOFTWARE KUSUKELA ukuzibandakanya naleli WEBSITE NOMA ITS OKUQUKETHWE. Isivakashi eqala ZONKE AMATHUBA OMUNTU VIRUS, Worms, NOMA EZINYE IZICI elonakalisayo.
Sicabanga akukho umthwalo umonakalo computer noma isofthiwe isivakashi noma yimuphi umuntu isivakashi kamuva baxhumana kusukela code elonakalisayo noma idatha ngephutha wadlulela ikhompyutha ezivakashi. Again, isivakashi ukubukwa futhi baxhumana lokhu site, noma amabhanela noma pop-ups noma ukukhangisa ukhonjiswe kwalo, engozini yakhe.
Nesitatimende FOR umonakalo UKULANDA
Isivakashi elanda ulwazi kusuka kule indawo ngalesi engozini siqu. Iwebhusayithi akayenzi iwaranti ukuthi alandwayo ayingxenye mahhala elonakalisayo computer amakhodi, okubala, kodwa kungagcini, amagciwane nezibungu.
Ngokuzibheka, usebenzisa, noma kucocisana nganoma iyiphi indlela nalo indawo, kuhlanganise amabhanela, ukukhangisa, noma pop-ups, okulandwayo, futhi njengoba isimo website ukuvumela wokubuka yakhe Kuvunyelwe, Isivakashi phakade waives kulungile izicelo umonakalo ka zonke incazelo okusekelwe yimuphi isici esiyimbangela imiphumela singalimali kungenzeka, kungakhathaliseki ukuthi ezishaqisayo noma olunzulu, ukuthi ngokomzimba noma ngokomzwelo, engenzeki ezingakabonakali, ukuthi siqu noma commercial e nature. Ngoba noma yisiphi kwegunya manje ukuthi kungavumela lezi okungafakwa icala lethu esiphezulu ngeke idlule lemali ikhokhwe nguwe, uma ikhona, ngoba usebenzisa website noma isevisi yethu.
Ngaphezu kwalokho, uyavuma hhayi ukubamba kithi nesibopho sokukhokhela umonakalo ezihlobene nezindaba kwamandla ethu, kubandakanya kodwa kungagcini, izenzo zikaNkulunkulu, war, ubuphekula, izenzo zokuvukela, izibhelu, isenzo sobugebengu, izinhlekelele zemvelo, ukuphazamiseka ukuxhumana noma ingqalasizinda, zabasebenzi ukusweleka noma ukuphazamiseka (kuhlanganise iziteleka unlawful), ukusweleka of materials, kanye neminye imicimbi okuyizisekeli okungesizo ngaphakathi kwamandla ethu.
Isivakashi uyavuma ukuthi uma kwenzeka wenza umonakalo kithi noma wesithathu ngenxa noma ephathelene nokusetshenziswa http://www.knwautobody.com, Isivakashi ngeke ukuvikela nathi, futhi, uma kusebenza, ukuvikela us ngokumelene, zokugomela for umonakalo.
Isivakashi uyavuma njengoba isimo wokubuka, ukuthi yikuphi ukuxhumana phakathi Visitor futhi Iwebhusayithi uthathwa a ukuzithoba. Zonke izethulo, kuhlanganise izingxenye zalo, ihluzo oluqukethwe kwalo, noma yikuphi okuqukethwe kwe-ukuzithoba, azakuba impahla okukhethekile Iwebhusayithi futhi kungenzeka ingasetshenziswa, ngaphandle kwemvume eminye, ukusetshenziswa ngaphandle kokucabangela eyengeziwe yiluphi uhlobo. Isivakashi uyavuma ukuxhumana ukuthi ulwazi kuphela Iwebhusayithi, lapho efisa phakade ukuvumela Iwebhusayithi ukusebenzisa nganoma iyiphi indlela njengoba ubona kufanelekile. “Iziphakamiso” ilungiselelo Inqubomgomo Yemfihlo.
Asikho isaziso eyengeziwe yanoma yiluphi uhlobo yisiphi isizathu okudingekayo anikezwe Visitor futhi Visitor ngokucacile uqinisekisa ukuthi ukuqonda ukuthi ilungelo uphawule is ziyayekwa njengoba isimo imvume ukubuka noma uxhumane website.
Njengengxenye ukucabangela ukuthi Iwebhusayithi kudinga ukubukwa, usebenzisa noma ukuzibandakanya naleli website, Isivakashi uyavuma ukusebenzisa umbango esihlala for ukusho, ingxabano, noma mpikiswano (“FAKA ISICELO”) kwanoma yiluphi uhlobo (ukuthi inkontileka, tort noma ngenye) engenxa noma ephathelene kulokhu kuthenga, lo mkhiqizo, kuhlanganise nezindaba akucelwa, izinkinga zobumfihlo, futhi imigomo nezindaba ukusetshenziswa.
Arbitration uyakuba kwenziwe ngokulandela imithetho American Arbitration Association okuyizinto empeleni ngosuku impikiswano uhanjiswe American Arbitration Association. Ulwazi mayelana American Arbitration Association, Imithetho yayo, futhi izinhlobo zawo zitholakala kusukela American Arbitration Association, 335 Madison Avenue, Floor 10, I-New York, I-New York, 10017-4605. Ukuzwa kuyokwenzeka emzini noma County yomnikazi http://www.knwautobody.com.
In akukho cala bayakuyiphendula umbukeli, isivakashi, ilungu, isikhokhelo noma ikhasimende banelungelo ukuya enkantolo noma abe kwecala amajaji. Viewer, isivakashi, ilungu, isikhokhelo noma ikhasimende ngeke babe lokwenza izenzo kokutholakala pre-trial ngaphandle uma emithethweni; ngeke babe ilungelo lokubamba iqhaza njengabantu ummeleli noma ilungu noma yimuphi class of abafake izicelo eziphathelene yisiphi isihloko claim ukuba ukulamula umbango; isinqumo umlamuli kuyoba kokugcina ephonsa namalungelo limited sesikhalo.
Iqembu linqoba uyakuba angabuyiselwa by ezinye party for zonke izindleko ezihambisana ukulamula umbango impikiswano, kuhlanganise ummeli Imali, iqoqo Imali, Izimali zophenyo, zohambo.
Uma noma yiluphi udaba mayelana lokhu kuthenga; ziyiswa phambi kwenkantolo yomthetho, pre- noma post-ukulamula umbango, Viewer, isivakashi, ilungu, isikhokhelo noma ikhasimende uyavuma ukuthi kwegunya futhi efanele ukuba isimo futhi umuzi wamemezela ulwazi contact yomnikazi web ngaphandle uma echaziwe lapha. Esimweni ukuthi icala in a enkantolo federal, inkantolo efanele kuzakuba inkantolo eziseduze federal kumnikazi http://www.knwautobody.com yekheli.
Viewer, isivakashi, ilungu, isikhokhelo noma ikhasimende uyavuma ukuthi umthetho osebenzayo ukuze usetshenziswe lingabazweli, Kuzo zonke izimo,, kube ukuthi isimo umnikazi http://www.knwautobody.com.
Umthengisi lokhu mkhiqizo:
Imininingwane imeyili: admin@knwautobody.com,Wonke Amalungelo Agodliwe.